विद्यार्थी नेतालाई देउवाले भने, नेविसंघ कहाँ छ ? « Janata Samachar
नेविसंघलाई गाउँ जान निर्देशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पछिल्लो समय खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा नेविसंघ केन्द्रिय कार्यसमितिले शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सभापति देउवाले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नेविसंघको अध्यक्ष भएको मान्छे आफू तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउनुहुँदै सभापति देउवाले नेविसंघको अहिलेको तालले यस्तो पद पाउन मुस्किल हुने बताउनुभयो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘नेविसंघ जहाँ पनि हारेको हा¥यै छ, हामीले जता पनि जित्थ्यौंंै, अहिलेका नेविसंघका नेतालाई लाज लाग्दैन ? खै नेविसंघको नेतृत्व गाउँ गाउँमा गएको ।’ विद्यार्थी र जनताको बीचमा विद्यार्थी संगठन देखिन छोडेको भन्दै सभापति देउवाले नेविसंघलाई गाउँगाउँमा गतिविधि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
नेविसंघ पछिल्लो समय महाधिवेशन रोकिएर तदर्थ समितिको भरमा चलिरहेको छ । तदर्थ समितिको म्याद पनि घर्किंदै छ । नेपाली कांग्रेसको नर्सरीको रुपमा मानिने नेविसंघमा देखिने नेतृत्वको समस्या कहिले टुंगिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अब विस्तारै मिल्छ, नेविसंघका नेताहरु एक आपसमा मिलेको भए पहिले नै टुङ्गिने थियो । तपाइँहरु नमिलेकाले रोकिएको त हो नि ?’ सभापति देउवाले कोरोना महामारीका बेला नेविसंघले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुगांनाले नेविसंघले सरकारले गर्ने हरेक जनविरोधी क्रियाकलाप र विद्यार्थीका सरोकारसँग सम्बन्धित विषयको खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा नेविसंघ केन्द्रिय कार्यसमितिले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा करिब ३ सय बढीले रक्तदान गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम संयोजक तथा महामन्त्री उर्मिला थपलियाले गर्नुभएको थियो ।